सेयर बजारमा झण्डै १ सय अंकको वृद्धि, यी कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाए धेरै – Samriddhakhabar
July 18, 2021 खबर समृद्धLeaveaComment on सेयर बजारमा झण्डै १ सय अंकको वृद्धि, यी कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाए धेरै
नयाँ आर्थिक वर्षमा कारोबार भएको पहिलो दिन सेयर बजारको परिसूचक नेप्से झण्डै १ सय अंकले बढेको छ। ९७. २ अंकले बजार बढेर २९८० अंक कायम भएको छ।
यस दिन कारोबार रकममा पनि वृद्धि भएको छ। ११ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ। सबै समूहहरु बढेका छन्।
जेठ ३१ गते परिसूचकले सबैभन्दा धेरै ३०२६ अंक कायम गरेको थियो। त्यस्तै जेठ ३० गते सबैभन्दा धेरै १९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको रेकर्ड छ।
समूहगत रुपमा हेर्दा बैंकिङ ९२, ब्यापार ३३, होटल तथा पर्यटन ५८, विकास बैंक २३३, जलविद्युत ४५, फाइनान्स ३५, निर्जीवन बीमा ४४१, उत्पादन १६५, अन्य १९, माइक्रोफाइनान्स १९० र जीवन बीमा ६४८ अंकले बढेका छन्। यस दिन सिन्धु विकास बैंक, सिंगटी हाइड्रोपावर, ङादी ग्रुप, समृद्धि फाइनान्स र हिमालय पावर पार्टनरका सेयर लगानीकर्ताले १० प्रतिशत मूल्य कमाए।
त्यस्तै सिद्धार्थ बैंकको मूल्य ८ प्रतिशतले बढेको छ। महालक्ष्मी विकास बैंक, एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक र पाँचथर पावरको मूल्य साढे ७ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढ्यो। घट्ने कम्पनीको मूल्य गिरावट दर भने २ प्रतिशतमुनि रह्यो।
मल्टिपर्पोज फाइनान्सको १.७७ तथा रिडी हाइड्रोपावरको १.३९ प्रतिशतले मूल्य घटेको छ। अरुण भ्याली, नारायणी डेभलपमेन्ट र माथिल्लो तामाकोसीको मूल्य पनि घटेको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहँदा बजारमा ठूलो अंकको वृद्धि देखिएको छ।
देउवाको ज्योतिषीले गरे अर्काे भविष्यवाणी ! हेर्नुहोस्।
August 28, 2021 खबर समृद्ध
नेपाली सेनाले खोल्यो २२९ जना अधिकृत क्याडेट पदको लागि विज्ञापन, सम्पुर्ण जानकारीको विवरण
January 2, 2022 January 2, 2022 खबर समृद्ध
October 19, 2021 खबर समृद्ध